10 ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ ဦး တည်ရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ ဦး တည်ရာများ
99% တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ရှာဖွေသူများသည်မော်ကွန်း Safari ခရီးစဉ်အတွက်အာဖရိကသို့သွားရန်ရွေးချယ်ကြသည်. သို့သျောလညျး, ငါတို့ရွေးပြီ 10 ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးတောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များ, ဥရောပကနေတရုတ်အထိ, ဒီထက် - ခရီးသွားလာ, ဒါပေမယ့်အများဆုံးအမှတ်ရစရာနှင့်အထူးသောနေရာများ.
1. Jiuzhaigou တရုတ်နိုင်ငံ
နေအိမ် 40% ရိုင်းတိရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ်များ၏, နှင့်တရုတ်ရှိသတ္တဝါ, အဆိုပါ Jiuzhaigou ချိုင့်သည် 4800 အမြင့်မီတာ. Jiuzhaigou ချိုင့် အဆိုပါတစ်ခုဖြစ်သည် 10 ကမ္ဘာပေါ်ရှိတောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာရှုခင်း နှင့်ကြွယ်ဝသောဂေဟစနစ်.
Jiuzhaigou ချိုင့်၌, သငျသညျကြည့်ရှုရန်အဖိုးမဖြတ်နိုင်အခွင့်အလမ်းရပါလိမ့်မယ် Gရာမပန်ဒါ, ပန်နီနီ, စီချွမ် takin, နှင့် snub- နှာခေါင်းမျောက်. ဤရွေ့ကားရာစုနှစ်များစွာ Jiuzhaigou ချိုင့်၌နေထိုင်သောအခြားရှားပါးတိရိစ္ဆာန်များအနည်းငယ်ပဲ. အဆိုပါမျိုးစိတ်များသည်ရေတံခွန်waterရိယာ၌နေထိုင်ကြသည်, ရေကန်များ, ထုံးကျောက်တောင်များ, နှင့် Krast ဖွဲ့စည်းမှု, သင်၏စိတ်ဓာတ်များနှင့်တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်အားလပ်ရက်များကိုအဆင့်တိုင်းသို့မြှင့်တင်ပေးမည့်ထူးခြားလှသည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်.
တရုတ်ပြည်ရှိ Jiuzhaigou ချိုင့်သည်အဘယ်မှာရှိသနည်း?
လှပသော Jiuzhaigou ချိုင့်သည်တရုတ်နိုင်ငံစီချွမ်ပြည်နယ်တွင်ရှိပြီးပေကျင်း (သို့) Chengdu မှဖြစ်သည်.
2. ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ ဦး တည်ရာများ: တရုတ်ပြည်ရှိ Shennongjia
စီချွမ်နှာခေါင်းနှာခေါင်းမဲ့မျောက်ကိုတွေ့ဖို့မင်းဝေးဝေးသွားစရာမလိုတော့ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရှားရှားပါးပါးမျောက်ဟာတရုတ်ပြည်အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့သစ်တောတွေမှာနေလို့ပါ။. ဒါအမှန်ပဲ, အဆိုပါ Shennongjia သဘာဝထိန်းသိမ်းရေး ဟူဘိုင်ပြည်နယ်ရှိမျောက်မကြီး၏အိမ်ဖြစ်သည်, ဝက်ဝံဖြူ, တိမ်တိုက်များ, ဘုံကျားသစ်, နှင့်အာရှအနက်ရောင်ဝက်ဝံ.
ဖြည့်စွက်ကာ, Shennongjia သဘာဝဘေးမဲ့တောသည်မြင့်မားသောတောင်များနှင့်နိမ့်ကျသောမြစ်များနှင့်အတူထူးခြားလှပသော. ဆောင်းတွင်းမှနွေရာသီအထိဖြစ်သည်, တစ်နှစ်ပတ်လုံးရိုင်းသဘာ ၀ အမြင်များပြောင်းလဲသွားသည်, သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ဆုံးဖြတ်သည့်အခါတိုင်းကွဲပြားခြားနားသောအတွေ့အကြုံကိုကတိပေး. သို့သျောလညျး, လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်မှာမေလမှစက်တင်ဘာလဖြစ်သည်, ပြီးတော့မင်းလက်မှတ်တွေကြိုတင်မှာထားသင့်တယ်.
တရုတ်ပြည်ရှိ Shennongjia သဘာဝဘေးမဲ့တောသည်?
Shennongjia သိုက်သည်တရုတ်ပြည်အလယ်ပိုင်းတွင်ရှိသည်, နှင့် Muyu မြို့၌သင်တို့၏တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်အခြေစိုက်စခန်းလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်.
3. ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ ဦး တည်ရာများ: တရုတ်နိုင်ငံရှိ Huangshan တောင်
ကဗျာဆရာများနှင့်စာရေးဆရာများကိုလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခု, Huangshan တောင်သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိတောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည်. Huangshan ကို Anhui ပြည်နယ်ရှိအပူပိုင်းရာသီဥတုဇုန်တွင်တွေ့ရှိရသည်. ထိုကွောငျ့, ပြောက်လင်းယုန်အပြင်၌, နှင့်အာရှရိုင်းကြောင်, ဒီမှာအပင်များနှင့်ပန်းများသည်အချစ်ဆုံးနှင့်အထူးခြားဆုံးဖြစ်သည်.
ရှားပါးတောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များ’ ကျက်စားရာနေရာသည်ရှေးခေတ်ထင်းရှူးပင်များနှင့်ကျောက်ကျောက်ကျောက်ဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်သည်, ဘယ်မှာသင်မိုclouds်းတိမ်ကိုစီးပေါ်မှာပျံဝဲနိုင်ဘူး. သင်လုပ်ရန်အားလုံးသည်တစ်ခုရွေးရန်ဖြစ်သည် 70 ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာများအတွက်inရိယာထဲမှာအထွတ်အထိပ် ရှုခင်းများ သဘာဝအရံ၏. အဓိကအချက်, ကြည့်ဖို့ဤမျှလောက်အတူ, သင်စာအုပ်ဆိုင်ယူသင့်တယ် 2-3 မမေ့နိုင်သောနေ့ရက်များ Huangshan အတွက်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်အားလပ်ရက်.
တရုတ်နိုင်ငံရှိ Huangshan သဘာဝဘေးမဲ့တောသည်အဘယ်မှာရှိသနည်း?
Huangshan တောင်သည်3ရှန်ဟိုင်းကနေနာရီကွာအကွာအဝေး မြန်နှုန်းမြင့်ရထား, Anhui ပြည်နယ်၌တည်၏.
4. ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ ဦး တည်ရာများ: အီတလီနိုင်ငံမှာလင်းပိုင်များအတွက် Liguria
Liguria နှင့် Cinque Terre ရောင်စုံနှင့်သာယာလှပကမ်းရိုးတန်းနှင့်မြို့ကြီးများကျော်ကြားကြသည်. အမှု၌သင်တို့မသိခဲ့ပါ, Liguria သည်ဝေလငါးနှင့်လင်းပိုင်များကြည့်ရှုရန်အတွက်အလွန်ကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. မေလမှစက်တင်ဘာအထိ, စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောရှာဖွေမှုအရ Liguria ရှိလှေခရီးစဉ်များစွာတစ်ခုကိုသင်သွားနိုင်သည် အီတလီမှာအဏ္ဏဝါဘဝ.
Cinque Terre ရှိလှပသောကမ်းရိုးတန်းများနှင့်ကမ်းပါးများသည်လျှို့ဝှက်ကျောက်ဆောင်များဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်, နှင့်အောက်မှာ -The- ပင်လယ်အံ့ဘွယ်သောအမှု. ဒါကြောင့်, လှေကနေဒါမှမဟုတ်ရေငုပ်ထံမှ, နှင့် snorkeling, သငျသညျ Liguria အတွက်အဏ္ဏဝါတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်အားဖြင့်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်. Liguria ရှိတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်အားလပ်ရက်သည်နွေရာသီအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်.
5. Pyrenees ခုနှစ်တွင်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်အားလပ်ရက်
သင်၏ခေါင်းပေါ်မှာရွှေလင်းတကဲ့သို့ပျံဝဲနေသောငှက်များ, နှင့်လမ်းကြောင်းအတွက်ဗီရိုနှင့် ibex, ပင်ရင်းနီရီးယားသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားလှပသောတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. အံ့သြဖွယ်တောင်ထိပ်များ, နှင်းဖုံးထုပ်, နှင့်သဘာဝပွင့်, ပြင်သစ် Pyrenees ပန်းခြံသည်ဥရောပရှိတောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များအားလပ်ရက်အပန်းဖြေရန်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်.
ဒါကြောင့်, ခမ်းနားသော Pyrenees အတွက်တောင်တက်ခြင်းအပြင်, သင်ဝက်ဝံခြေရာခံခရီးကိုသွားနိုင်, သို့မဟုတ်ငှက်များဓာတ်ပုံပညာခရီးစဉ်. ပြင်သစ် Pyrenees ဥရောပတွင်လူကြိုက်များသောအားလပ်ရက်ခရီးစဉ်ဖြစ်သော်လည်း, အဆိုပါareaရိယာကိုသင်ကြောက်နေအခြားခရီးသွားများအတွက်စိတ်ပူမနေသင့်ကြောင်းကျယ်ပြန့်သည် ရိုင်းသောအဆင်းလှသောတိရိစ္ဆာန်များ.
ပြင်သစ် Pyrenees ကိုရောက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကဘာလဲ?
လန်ဒန်ကနေ Eurostar ယူခြင်း, ထို့နောက် TGV ရထားသည် Paris သို့မဟုတ် Lille မှ Toulouse သို့သွားသောအခါ Pyrenees သို့သွားသောအကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်.
6. ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ ဦး တည်ရာများ: အဆိုပါ Camargue ပြင်သစ်မှာ
ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ Camargue အမျိုးသားထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေကိုတည်ထောင်ခဲ့သည် 1972 နှင့်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ကာကွယ်ထားအမျိုးသားဥယျာဉ်. နေဆဲ, lagons နှင့် barshland သည်ဥရောပရှိအကာအကွယ်အရှိဆုံးမြေများဖြစ်သည်, ဒီမှာနေအိမ်ဖြစ်ပါတယ် 400 ငှက်မျိုးစိတ်များနှင့်ပိုမိုကြီးမားသောပန်းရောင် flamingo.
ဤတွင်သင်သည်လည်းဥရောပရှိအကြီးဆုံးမြစ်တစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်ရန်အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်, မြစ်ဝကျွန်းပေါ်, ရိုင်းသောမြင်းတို့ကိုလည်းရှာကြ၏. ထို့အပြင်, s ကိုသင်ဒီမှာတွေ့နိုင်သောအထူးငှက်မျိုးစိတ်အချို့သည်ခရမ်းရောင် Heron များဖြစ်သည်, Little Terns, နှင့်အနက်ရောင်ခေါင်းနှစ်လုံး Gull.
သငျသညျပဲရစ်ကနေ Nimes သို့ရထားစီးနိုင်ပါတယ်, Marseille, သို့မဟုတ် Arles, ပြီးတော့ဘတ်စ်ကား.
7. Fisser Hofe ကိုသြစတြီးယားနိုင်ငံ
517 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်၏ကီလိုမီတာ, အနောက် Tyrol ရှိ Fisser Hofe သည်သြစတြီးယားနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားသောလျှို့ဝှက်ချက်များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်. များစွာသောဤအစက်အပြောက်ကိုငါသိ၏, ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဓာတ်ပုံပညာအတွက်လှပတဲ့နေရာတွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်.
နွေ ဦး ရာသီတွင် Fisser Hofe သည်အပြည့်အဝပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိသည်, ပြီးတော့သင်ကထူးကဲကောင်းမွန်တဲ့ Apollo လိပ်ပြာကိုဖမ်းယူနိုင်လောက်တဲ့ကံကောင်းလိမ့်မယ်. ဖြစ်ကောင်း, မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းတွင်သင်သည်ရွှေလင်းတတစ်ကောင်ကိုတွေ့လိမ့်မည်, သို့မဟုတ်အခြားရိုင်း chamois, ibex, နှင့်တောဝက်. သို့သျောလညျး, ထိုရှားပါးသောတိရိစ္ဆာန်များကိုရှာဖွေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာတောင်ပေါ်သို့တက်ခြင်းဖြစ်သည်, သို့ 3000 မီတာ, Fisser Hofe အတွက်လမ်းကြောင်းများစွာထဲကတစ်ခု.
သြစတြီးယားနိုင်ငံက Fisser Hofe ကိုရောက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကဘာလဲ?
OBB ရထားဖြင့်သင်သွားနိုင်သည် အဓိကမြို့ကြီးများ သြစတြီးယားမှာ Tyrol ရှိ Fiss မြို့. Salzburg, ဗီယင်နာ, OBB ရထားဖြင့် Innsbruck သို့ Fiss သည်လူကြိုက်များသောရထားခရီးသွားလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်.
8. ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ ဦး တည်ရာများ: ဒူဘိုင်းမြစ်ရှိတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်
မှ ဂျာမနီရှိသစ်တော, ဥရောပတစ်လွှားရိုမေးနီးယား, ဒန်ညူမြစ်သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိတောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ထိုကွောငျ့, ရေနှင့်အစားအစာအကြီးအအရင်းအမြစ်အဖြစ်, ဒိုင်ညူမြစ်သည်မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိသောမျိုးစိတ်များကိုရှာဖွေရန်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ.
ဥပမာ, အနည်းငယ်ဥရောပ Kingfisher ဟာခမ်းနားတစ်ခုဖြစ်သည် 400 ဒန်ညုမြစ်တွင်နေထိုင်သောငှက်မျိုးစိတ်များ. ဖြည့်စွက်ကာ, ကိုယ့်Z Zemplen တောင်ကုန်း, နှင့် Aggtelek အမျိုးသားဥယျာဉ်, မင်းကြည့်နိုင်တယ် 73 နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်, အနီရောင်ရှိ fox နှင့်အညိုယုန်ကဲ့သို့.
9. ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ Merfelder Bruch သဘာဝဘေးမဲ့တော
ဥရောပရှိနောက်ဆုံးရိုင်းမြင်းများနေထိုင်ရာနေရာနှင့်အစဉ်အဆက်တွင်အဆင်းလှဆုံးမြင်ကွင်းများအနက်တစ်ခုမှာရိုင်းမြင်းများပြေးနေသည့်မြင်ကွင်းဖြစ်သည်. ထိုကွောငျ့, Hohe Mark ပန်းခြံသည်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များကြည့်ရှုရန်အကြိုက်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်.
ဖြည့်စွက်ကာ, သစ်တောများနှင့်အစိမ်းရောင်မြေများကြားတွင်, သငျသညျအဆင်းလှသော Dulmen Pony ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကံကောင်းပေလိမ့်မည်. Dulmen Pony သည်မြင်းမျိုးဖြစ်သည်, Merfelder Bruch တွင်နေထိုင်ကြသည်, ရိုင်းသောမြင်း၏မြို့၌၎င်း,, ဒါမှမဟုတ် Rhine-Westphalia. Merfelder Bruch သည်သူတို့၏သဘာဝကျက်စားရာနေရာတွင်လွတ်လပ်စွာနေထိုင်သောမြင်းမျိုးဆက်နှစ်ခုလုံးအတွက်သန့်ရှင်းရာဌာနဖြစ်သည်.
Merfelder Bruch သို့သွားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကားအဘယ်နည်း?
ဗြိတိန်မှသို့မဟုတ်ဂျာမနီရှိမည်သည့်နေရာမှမဆို Kolon နှင့် North Rhine-Westphalia သို့ရထားဖြင့်သွားလာခြင်း. ထိုအခါသင်သည်ခရီးစဉ်တစ်ခုတွင်သို့မဟုတ် Merfelder Bruch သို့ကားတစ်စီးငှားနိုင်သည်.
10. ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ ဦး တည်ရာများ: ဆွစ်တောင်တန်း Alps ၏ Wengen ပန်း
ငါတို့အပေါ်မှာရှိသမျှသောအံ့သြဖွယ်သောနေရာများ 10 ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များသည်ဥရောပရှိရှားပါးတောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များနေထိုင်ရာဒေသဖြစ်သည်. သို့သျောလညျး, Wengen သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ၏နေအိမ်ဖြစ်ပြီးရုက္ခဗေဒဆိုင်ရာကောင်းကင်ဖြစ်သည်. တည်ရှိပြီး ဆွစ်အဲလ်ပ်တောင်တန်း၌တည်၏, ဒီမှာအမြင်များကိုလုံးဝအံ့သြစရာရှိပါတယ်, နှင်းဖုံးတောင်များနှင့်အတူ, စိမ်းလန်းစိုပြေသောချိုင့်ဝှမ်း, ရေတံခွန်များ, နှင့်အရှိဆုံးအံ့မခန်းအပွင့်.
ဇူလိုင်လတွင်တောရိုင်းလိပ်ပြာများသည်ရှားရှားပါးပါး Lady Slipper Orchid ကိုအလှဆင်ကြသည်, တံပိုးမှုတ်သောအခါတပါးအမျိုးသား, အချစ်, နှင့် Eiger ရေခဲမြစ်တလျှောက်တွင်အခြားအံ့မခန်းပန်းပွင့်. ဤရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောပန်းများသည်ဆွစ်တောင်တန်းများတွင်မြင့်တက်သည်, အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ Lauterbrunnen ချိုင့်ဝှမ်းအထိ. ဒါကြောင့်, သဘာဝတရား၏ဤအံ့ဖွယ်အမှုများကိုမြင်နိုင်ရန်မိုးတိမ်နှင့်အပြာကောင်းကင်သို့တက်ရန်ပြင်ဆင်ထားပါ.
Wengen Bernese Oberland ကိုရောက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကဘာလဲ?
Lauterbrunnen ချိုင့်သို့ရထားစီးပါ, ပြီးတော့ Wengen ရွာကိုရထားနဲ့သွားမယ်.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, မမေ့နိုင်သောခရီးစဉ်တစ်ခုကိုစီစဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်, သို့မဟုတ်အားလုံး 10 ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးတောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များ: ရထားနဲ့ဥရောပဒါမှမဟုတ်တရုတ်ကိုဖြတ်ပြီး.
သင်၏ဘလော့ဂ်ကို“ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးတောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ၁၀ ဦး အကောင်းဆုံးနေရာ ၁၀ ခု” ကိုသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်သို့ထည့်သွင်းချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-wildlife-destinations-world%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး တိရိစ္ဆာန် အကောင်းဆုံး BestTravelDestinationsChina bestWildlifedestinationsinchina BestWildlifevacationsworldwide တောရိုင်းဘဝ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်